सुरु भयो अनलाइनबाटै पुनः श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था, कति लाग्छ ? कसरी लिने ? थाहा पाउनुहोस् । – Yuwa Aawaj
बैसाख २७, २०७८ सोमबार 400
Prevवैदेशिक रोजगार – स्वास्थ्य सतर्कता मापद-ण्डहरू पालना गर्दै अन्तराष्ट्रिय उडान सुचारू गरौँ ।’
Nextमनछुने भनाईहरु – यति ब्यस्त पनि नबन्नुस । ताकी त्यो ब्यस्तताले सम्बन्धलाई बेवा-रिसे नबनाओस ।